ईयूको प्रतिवेदनप्रति चुपचाप छ माओवादी ? - Everest Dainik - News from Nepal
ईयूको प्रतिवेदनप्रति चुपचाप छ माओवादी ?
काठमाडौं – नेपालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै युरोपेली युनियन (ईयू)ले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन प्रतिवेदनप्रति सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र मौन देखिएको छ ।
जब कि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाट नै उक्त प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस देवताल गाउँपालिका बारामा माओवादीकाे स्पष्ट अग्रता
धेरै नागरिक पक्षले समेत यसको विरोध गरिरहेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ । तर माअाेवादी केन्द्रका नेताहरुले स‌सदमा यसकाे विराेध गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस माओवादी केन्द्रले बर्दिवासमा पनि खाता खोल्यो